Ahoana Ny Fomba Ahazoana Maimaim-Poana Adobe Illustrator - Fomba 2 Hampiasana Maimaim-Poana Ny Adobe Illustrator
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ahoana ny Fomba Ahazoana Maimaim-Poana Adobe Illustrator
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-11, Malagasy Blog
Tsy hainao ny fomba hahazoana Adobe Illustrator maimaimpoana fa te-hamorona endrika matihanina nefa tsy mandoa $ 20 isam-bolana fisoratana anarana? Zahao ireo fomba roa azo antoka amin'ny fampidinana ireo Adobe Illustrator maimaimpoana nefa tsy manitsakitsaka ny lalàna, ireo safidy hafa ankafiziny ary ny loza mitatao amin'ny piraty miafina rehetra.
Tombony azo amin'ny fanoharana maimaim-poana
Fitaovana famolavolana matihanina
Afaka ampidirina amin'ny vokatra Adobe hafa
Manohana ireo karazana endrika rehetra
Fandraisana mora amin'ny Adobe Font
Azo ampiasaina amin'ny fampisehoana
Mampalahelo fa tsy azo atao ny mampiasa Adobe Illustrator maimaim-poana, na dia azonao atao aza ny mitsapa an'ity mpamoaka sary vector ity mandritra ny 7 andro maimaim-poana, na mametraka Adobe Illustrator maimaimpoana amin'ny findainao.
Fitsarana maimaimpoana ho an'ny Adobe Illustrator dia fomba tsara hanandramana ny fahombiazan'ny programa tsy misy fetra mandritra ny 7 andro. Ity variant ity dia mety ho an'ireo izay tsy nanapa-kevitra ny hisintona ny editor vector.
FAQ fitsapana maimaimpoana ho an'ny Adobe Illustrator:
Raha sendra manana fanontaniana momba ny fanandramana maimaimpoana amin'ny Adobe Illustrator ianao dia jereo ny valiny ao amin'ny faritra FAQ.
Azo atao ve ny misintona ny fanandramana Adobe Illustrator CS6?
No. Illustrator no hany andiany fanandramana farany an'ny Adobe Illustrator izay azo sintonina maimaim-poana.
JEREO NY FOMBA FITSARANA MAIMAIMPOANA ILLUSTRATOR
Ny fanandramana maimaimpoana an'i Adobe Illustrator vaovaon'ny Illustrator?
Ie. Izy io dia manana ny asany sy ny fanavaozana ny kinova Illustrator farany teo.
Raha liana amin'ny vokatra Adobe hafa ianao dia vakio bebe kokoa ny fomba ahazoana maimaimpoana ny Lightroom ary mampiasa Maimaimpoana Photoshop.
Mahazo fihenam-bidy ho an'ny Adobe Illustrator ve aho raha mpianatra?
Ie. Ny mpianatra sy ny mpampianatra dia mety mividy famandrihana amin'ny Creative Cloud Collection manontolo miaraka amin'ny fihenam-bidy 60%.
Inona no hatao raha tapitra ny fotoam-pitsarana?
Mandehana any amin'ny faritra "Vidio" ary safidio ny iray amin'ireo drafitra misy.
JEREO NY TOKONY MOMBA NY VAROTRA
Fomba iray hafa hampiasana Adobe Illustrator Free
Mifanaraka: Android / iOS
MANORA MAIMAIMPOANA ILLUSTRATOR
Soa azo avy amin'ny fanoharana
Borosy azo namboarina
Fampidirina amin'ireo rindrambaiko Adobe hafa
Ny Adobe Illustrator Draw dia manolotra fitaovana sy fiasa malaza rehetra ho an'ny sary sary amin'ny interface tsotra sy maoderina. Ny fampiharana dia manohana ny sosona sy ny borosy isan-karazany. Satria an'i Creative Cloud Collection ny Draw, dia mifanaraka amin'ireo fampiharana manaraka ireto izy: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Capture, Adobe Photoshop Sketch, ary app mobile Lightroom.
Azonao atao ny mandefa sary noforonina ao amin'ny solo-sainanao ary manohy manitsy fanovana voro-jotra amin'ny endrika vongan-tsarimihetsika ao amin'ny Illustrator na apetaho amin'ny sary Photoshop. Illustrator Draw dia manohana ny rindrambaiko vaovao indrindra, toy ny Adobe Ink, Adonit Jot Touch miaraka amin'ny Pixelpoint, Wacom, Pencil avy amin'ny FiftyThree Company, ary Apple Pencil. Mamela ny famoronana sary amin'ny alàlan'ny stilazy mora tohina amin'ny tsindry. Ankoatr'izay, noho ity fampiharana ity dia azonao atao ny mamoaka ny sangan'asa momba ny Behance, ary ny tena zava-dehibe dia maimaim-poana tanteraka ilay fampiharana.
Fa maninona ianao no tsy tokony hampiasa ny Adobe Illustrator Pirate Version?
Ny mpampiasa sasany dia mety mieritreritra fa tsy misy maharatsy ny misintona sy mampiasa riaka. Raha misintona programa piraty amin'ny Torrent ianao dia hahazo Adobe maimaim-poana. Na izany aza, eo no manomboka ny tombony ary manomboka ny andraikitra maha-mpanao heloka bevava. Etsy ambany, hilazalazako ny vokatry ny fampiasana rindrambaiko tsy misy fahazoan-dàlana.
Mino aho fa ny vokatra lehibe indrindra ateraky ny fampiasana rindrambaiko piraty dia ny andraikitra amin'ny heloka bevava. Angamba, maro aminareo no mbola tsy nieritreritra lalàna toy izany, na dia tsy fialan-tsiny aza ny tsy fahalalana ny lalàna, araka ny fantatrareo.
Ny zava-misy dia raha misintona rindrambaiko tsy manana fahazoan-dàlana ianao dia hahazo hafatra fampitandremana maromaro amin'ny mailakao izay mamaritra ny vokatry ny fisintomana tsy ara-dalàna. Raha tsy mijanona ianao ary manohy mampiasa tsy ara-dalàna ny fampiharana piraty, ny fifandraisana amin'ny Internet novonoin'ny mpamatsy anao, dia hahazo fiantsoana ianao. Vokatr'izany dia tsy maintsy mandoa onitra amin'ny vola $ 1000 ianao.
Ny lozisialy Pirate, amin'ny fitsipika iray, dia iray amin'ireo mpizara virus lehibe indrindra amin'ny solosainao. Rehefa nisintona ny Adobe Illustrator maimaim-poana avy amin'ny loharano tsy azo itokisana ianao, dia mety hahazo viriosy samihafa. Ny zavatra tsy mampidi-doza indrindra mety hitranga dia ny fametrahana ho azy ireo programa tsy ilaina hafa. Ankoatr'izay, ny viriosy dia mety hampihena ny fahombiazan'ny PC-nao. Ny vokany lehibe indrindra dia ny fahasimban'ny rafitry ny fiasananao na mety hangalarana mihitsy aza ny angona anao manokana.
Tsy misy fanavaozana
Ny Adobe Company dia faly hatrany amin'ny fanavaozana izay manitsy ireo kitapo isan-karazany, manatsara na manampy fitaovana vaovao. Rehefa avy nisintona ny hacker Adobe Illustrator ianao dia tsy azonao atao ny manavao azy amin'ny kinova farany ary hampiasa azy io mandra-pandefanao kinova hafa tsy misy fahazoan-dàlana (izay tsy dia misy loatra).
Fanavaozana ILLUSTRATOR MAIMAIMPOANA
Mba hitrandrahana ny programa dia mahita teboka malemy ao anatin'ilay programa ireo mpijirika mba hanokatra kaody loharano ary hamaky azy. Rehefa vaky ny programa dia manova ny kaody loharano ireo mpijirika amin'ny fomba izay ahafahan'ny rindrambaiko ampiasaina tsy tapaka. Rehefa ovaina ny kaody loharano dia mety handratra fitaovana sasany ireo mpijirika. Vokatr'izany dia tsy hiasa tsara izy ireo, na hijanona tsy hiasa mihitsy. Tena mahazatra amin'ny programa hacked izany.
Tsy misy fanohanan'ny mpanjifa
Adobe dia orinasa matotra izay mikarakara ny mpampiasa azy. Ny fividianana ny vokatr'izy ireo dia hahazo fanampiana 24/7 ianao, izay azonao resahana amin'ny fanontaniana isan-karazany. Ny ekipa mpanohana dia hanampy eo am-pitantanana olana sasany amin'ny programa na hanazava ny fomba fiasan'ity fitaovana ity. Raha misintona kinova famoahana sary piraty ianao dia tsy ho afaka hanararaotra an'izany.
Tsy ny olon-drehetra no afaka mandoa $ 10 ka hatramin'ny $ 80 isam-bolana ho an'ny tonian-dahatsoratra vector. Izany no mahatonga ny mpamorona tsy miankina maro sy ny mpampiasa mahazatra mitady fomba hafa takatry. Raha manomboka mianatra ny sary vetaveta ianao, ny programa izay nofidiko ho safidy maimaim-poana amin'ny Adobe Illustrator dia mety tsara hanomezana izay ilainao. Tsy misy fisalasalana, Illustrator dia handresy amin'ny lafiny rehetra, na dia nanandrana naka ireo mpanonta sary akaiky indrindra izay mety amin'ny asan'ny vector aza aho.
Mampiasà MAIMAIMPOANA INKSCAPE
Fomba fanovana sary mora azo
Olana amin'ny fanafarana rakitra
Inkscape dia programa manokana izay natao hamoronana sy hikirakira sary vongana. Safidy maimaimpoana Adobe Illustrator maimaim-poana izy io, izay matetika ampiasaina handrafetana karatra, afisy, sary, logo ary sary. Izy io dia mamela ny famoronana sy fanovana sary vektor amin'ny alàlan'ny fitaovana isan-karazany. Azonao atao ny manoritra zavatra mampiasa fitaovana toy ny pensily, penina ary kaligrafi. Ankoatr'izay, misy mahitsizoro isan-karazany, ellipsis, polygons, spiral, azo atao an-tsoratra, ary maro hafa. Azonao atao koa ny manokatra sy mitahiry sary amin'ny endrika GZIP.
Ho fanampin'izany, ny programa dia mamela ny sary fanovana endrika malaza maro, ohatra, SVG, PNG, OpenDocument, DXF, sk1, PDF, EPS, PostScript, sns. Manoro hevitra an'ity fampiharana ity aho ho an'ireo izay mila programa azo antoka hananganana sy hanovana sary.
Mampiasà MAIMAIMPOANA GRAVIT
Trano famakiam-boky lehibe momba ny fananana vector
Fampiasana voafetra ihany
Tamin'ny voalohany, Gravit dia noforonina ho tonian-dahatsoratra vector an-tserasera hamoronana sary masina, sora-baventy, logo ary singa sary hafa. Na izany aza, nampiditra asa vaovao ny mpandrindra ary ity safidy hafa amin'ny fanandramana maimaimpoana an'ny Adobe Illustrator ity dia nanjary fitaovana matanjaka sary izay mifanaraka amin'ny sehatra Mac, Windows, Linux. Ny programa dia manana fitaovana feno ilaina amin'ny fikarakarana sary vongana.
Izy io dia manohana ny sosona, ny curves, ny sary geometrika, ny fitaovana isan-karazany amin'ny fisafidianana sy fanovana, lahatsoratra, ary asa maro hafa hiara-miasa amin'ireo zavatra. Ny tranomboky Gravit Designer an'ny fananana vector dia misy badge, endrika, emoji ary sary, izay azo atambatra mandritra ny fanovana sary. Etsy andanin'izany, Gravit dia azo ampiasaina ho tonian-dahatsoratry ny sary raster, satria misy ny fiasa toy ny cropping, masking, blending, resizing, ary fanampiana sivana. Ny asa namboarina dia azo tahirizina amin'ny endrika PNG, JPG, na SVG.
Mampiasà VECTR MAIMAIMPOANA
Ny kaonty manokana dia tsy maintsy atao
Vectr dia rindrambaiko vaovao iray izay mivoatra haingana, manampy ary manatsara ny fiasa isan-karazany. Mpanonta sary tsotra sy takatra izy io, izay ahafahanao manatanteraka hetsika haitao mahazatra toy ny famoronana sy fanovana tarehimarika geometrika, fihodinana, sns. Misy ambaratonga sy pejy maromaro izy io, izay manampy amin'ny fandaminana ny tetikasa. Vectr dia mamela ny fanafarana rakitra endrika toy ny AI, EPS, SVG, PNG, ary JPEG.
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fanamarihana an-tsoratra, fanitsiana sary, ary fanaovana sary an-tsary sy sary. Inona koa, izy io dia azo ampiasaina hamoronana logo, mari-drano, famolavolana interface tsara ho an'ny mpampiasa, fanesoana tranokala, sora-baventy, sary masina ary sary 2D. Misaotra an'i Vectr, afaka mamorona sary vongana zoomed ianao amin'ny alàlan'ny fiasa tsotra sy mora azo. Mora ny mifehy ny programa ary mety ho an'ireo, izay manomboka miasa miaraka amin'ny vector ary afa-po tanteraka amin'ny asa fototra momba ny fanovana sary.
Sintomy ny Adobe Illustrator Free
Adobe Illustrator for Mac / Win
Saripika Illustrator ho an'ny Android / iOS
Mba hitsapana maimaimpoana ity rindrambaiko ity dia ampidino ny kinova fitsapana nahazoana alalana na ampiasao ny fampiharana finday.
Tombony azo amin'ny Illustrator maimaim-poana
Fampiharana piraty an'ny mpanao sary
Safidy Illustrator maimaimpoana tsara indrindra